IYunivesithi Sydney - ISifundo waseyunivesithi phezulu Australia
The University of Sydney Iinkcukacha
isifinyezo : uOS
Zifumaneke : 1850
abafundi (nama.) : 53000
Musa ukulibala ukuba ukuxoxa The University of Sydney
Babhalise kwi The University of Sydney
IYunivesithi Sydney zichongwe 45 ehlabathini apha 2015-16 ezidumileyo QS World University Rankings.
Yinto bubungqina malumga ngokubanzi amandla eboniswe kulo lonke lethu 16 amandla, ezininzi kuzo aphezulu ithabathekisayo ngokwabo.
Ukukhokela iziphumo yeYunivesithi kwakukho Arts kunye noLuntu, iziphumo elifomatiweyo 14 ngokulinganayo kwihlabathi neyesibini Australia.
Zombini Life Sciences kunye Medicine yeeSayensi zoLuntu nezeNtlalo kunye noLawulo zichongwe 20 ehlabathini, kunye Sciences Life and Amayeza nokugcina ukuma wabo wesibini eOstreliya ityeli wesithathu.
Amandla multi-disciplinary uphando yeYunivesithi kungqinwe kwiziphumo QS, kunye nobuNjineli neTeknoloji, IiSayensi zeNdalo kunye neNzululwazi ngezeNtlalo yaye Management zonke kubekwa phezulu ezintlanu iinkalo zabo Australia, ngamnye efumana nokubeka wesithathu ekhaya. EzobuNjineli neTeknoloji aphakame 14 iindawo kuluhlu ukusuka 44th edibeneyo 30 ngokudibeneyo jikelele.
QS World University Rankings ngokuthi Subject 2016
IYunivesithi Sydney zichongwe phakathi kwamaziko elite ehlabathini, kunye 41 ye 42 izifundo ivavanywe ekuphumezeni makafakwe encotsheni 100 jikelele kwi QS World University Rankings ngokuthi Subject.
Engamashumi amathathu anesibini izifundo zethu zaye zahlulwa phezulu 50 jikelele, apho esithoba zaye zahlulwa phezulu 20.
INzululwazi yeMfuyo lalibekwa lesithoba ehlabathini kunye nenani elinye Australia, lo gama ezinye izifundo ezithathu babelene ebonisayo kwinombolo enye kazwelonke - Architecture / Yakhelwe Environment (17 jikelele), Medicine (17), nabongi (13).
Lwabadlali ezidumileyo zithathwa njengokuba kuthelekiswa lupheleleyo kwihlabathi zeeyunivesithi kwinqanaba zesifundo.
Iziphumo wabalaselisa ezintle yeYunivesithi kwizifundo kuzo zonke iinkalo sasisele, kubandakanya uMthetho (11), Education (16), Accounting and Finance (18), Geography (22), IsiNgesi uLwimi Uncwadi (20) kunye nobuNjineli – Civil and zesakhelo (20). Okokuqala, Philosophy wangena phezulu 50 jikelele kunye elifomatiweyo 37 ehlabathini lonke.
The University of Sydney songeza uluhlu iiyunivesithi Australia ukuvulwa Ø Graduate engqesho Rankings 2016, kwaye kwakhona koogxa phezulu 15 jikelele kunye elifomatiweyo 14.
Lwabadlali enemaphu ngaphezu 30,000 abantu ukuchonga imvelaphi emfundo yabantu abaninzi baziqeshe ehlabathini.
the 2015 Times Higher Education (LE) World University Rankings, leyo phambili ezicatshuliweyo uphando, ingeniso uphando, igama nendawo yokufunda, sasisele nathi 56 ngaphandle ngaphezu 1100 kwiiyunivesithi ehlabathini lonke.
I World University Rankings ke iitafile kuphela yokusebenza yiyunivesithi yehlabathi ukugweba kwiiyunivesithi kuwo onke lamaphulo yabo engundoqo, kuquka ezicatshuliweyo, uphando, ukufundisa, imbonakalo ngamazwe kunye nengeniso kwishishini. Yonyaka namazinga imiba umlinganiselo kuquka igama ezifundweni, manani ucaphulo, Ukudibana, kunye nengeniso uphando izidanga ezinikwe abasebenzi nganye.
IYunivesithi ukunyuka Sydney kweli 2015-16 namazinga ibiqhutywa ukunyuka kuzo zonke izalathisi, kunye ukuvuka likhulu igama kwizifundo, leyo yatsiba 24 ekhulwini, kunye ezicatshuliweyo leyo wabona 12 ulwando ekhulwini. Uphando kunye noshishino ingeniso bobabini ekhasa ngaphezu 10 ekhulwini.
The Times Higher Education University Rankings zipapashwe ngumniki-UK, abalimi kwihlabathi aphezulu kunye iinkcukacha kwicandelo lemfundo ephakamileyo ehlabathini.
Times Higher Education 2015 Global nokuqesheka University Rankings
IYunivesithi Sydney zichongwe 42 ehlabathini kunye nenani enye New South Wales kwi 2015 Times Higher Education Global nokuqesheka University Rankings.
Olu luhlu wadalwa evela seevoti Bubonke 2,200 abaququzeleli kunye 2,400 ekulawuleni kwanakubaphathi beenkampani ngamazwe kulo lonke 21 amazwe.
Times Higher Education World Rankings Reputation
Siye zichongwe phakathi phezulu 100 ezininzi ezidumileyo kwiiyunivesithi ehlabathini apha 2016 Times Higher Education World Rankings Reputation.
Kunye ebonisayo kwihlabathi 61-70, sigcine isikhundla sethu sesithathu eOstreliya, yaye enye kwiiyunivesithi ezintathu kuphela kuzwelonke ukuze zifakwe kuluhlu. KwiYunivesithi yaseHarvard ankqenkqeze kuluhlu lwabadlali, leyo besimo ngamaziko United States-based.
Lwabadlali yonyaka yenziwe ndifune imibono ngaphezu 10,300 abaphenduli, e 133 amazwe, malunga maziko intle yentsimi kwabo uphando nokufundisa.
US News & World Report Best Global Iiyunivesithi Rankings
IYunivesithi Sydney zichongwe 51 kwi 2015/16 US News & World Report Best Global Iiyunivesithi Rankings.
Siye kwakhona zahlulwa inani elinye eOstreliya Kwezonyango eKliniki kunye Physics, kunye noBugcisa noLuntu zaye zahlulwa phezulu 20 jikelele.
US News isebenzisa database Thomson-Reuters ukukala phezulu 750 amaziko jikelele. oku kuquka 12 Iimpawu ukusuka udume PhD manani zophando manani amaphepha kakhulu ezibonisiweyo nentsebenziswano yamazwe. Kwakhona oku kuquka ezinye manani bibliometric kwi iincwadi, ezicatshuliweyo, iincwadi kunye neenkomfa.
Hayi nje eqaqambileyo ... kodwa elihle
Asazi nje bakuzibalela kakhulu impumelelo ezifundweni; kwikhampasi yethu engundoqo Camperdown / Darlington rhoqo ithathwa njengenye yezona ezintle ehlabathini.
Daily Telegraph UK ukuba ibekwe nathi kule nombolo 10 Kudweliso Beautiful Universities yayo, kwaye sibe inani ezilithoba phezulu i I Huffington Post ngayo 15 Ukuqhubela ezantsi.
Ngelo, Sydney bangafumani ukunqwala. Kwi QS Best Student Cities, leyo esekelwe yokungabinako, umgangatho wokuphila, umsebenzi nomqeshi kunye neyantlukwano labafundi, loo nto sasisele yokuqala Australia kunye yesine ehlabathini.
kwaye 2014, ngokuqinileyo nokucetyiswa Global Kearney i-Global Cities Index wabeka Sydney phambili 83 mizi njengoko isixeko idumileyo ehlabathini ukuba bafunde kubafundi ngamazwe.
Nyaka ngamnye umzi liyakwamkela 50,000 abafundi betyelela, nayo macala 35,000 ukufunda kwidyunivesi kwiSixeko kwindawo Sydney.
Plant zokuzalela Institute
Zamanzi Geo-Information Sciences Laboratory
School of Literature, ubugcisa, and Media
School kweeLwimi nenkcubeko
School of zefilosofi kunye Historical Enquiry
ishishini (The University of School Business Sydney)
Isiyalo of Accounting
Uqeqesho of yokuHlaziya Business
Uqeqesho of Business Information Systems
Uqeqesho of Law Business
Uqeqesho of Business International
Isiyalo of Marketing
Ukuziphatha Umsebenzi Organisational Studies of
School of Aerospace, Engineering Mechanical and Mechatronic
School of zemichiza Biomolecular Engineering
School of Engineering Civil
School of Engineering Electrical and Information
Uqeqesho yokuziphatha and Social Sciences ngo-Health
Uqeqesho lwe Ukuzilolonga and Science Sport
Uqeqesho lwe Medical Radiation Sciences
Uqeqesho of Occupational Therapy
Isiyalo of Physiotherapy
Ukuziphatha kwe Rehabilitation Counselling
Uqeqesho Yokuthetha Pathology
uMthetho (The University of Sydney Law School)
School Central Clinical
WaBantwana wama-Hospital kwi Westmead School Clinical
Concord School Clinical
School Nepean Clinical
School Northern Clinical
School of Sciences Medical
School of Health Rural
School Sydney Adventist Hospital Clinical
School Westmead Clinical
Ukuziphatha kwe Addiction Medicine
Uqeqesho lwe Anatomy and Histology
Uqeqesho of Science Biomedical
Uqeqesho of Brain ne fyo Sciences (Ubuchopho ne Centre Ingqondo)
Uqeqesho Zeliso Clinical Eye Health
Isiyalo Indlebe, Nose nasemqaleni
Uqeqesho of Medicine Emergency
Ukuziphatha kwe General Practice
Uqeqesho of Medicine Genetic
Ukuziphatha kwe zokuPrinta Medical
Uqeqesho of Medicine Nonyango
School Ezinto igaye
Isiyalo of Medicine
Isiyalo of Obstetrics, G and Neonatology
Uqeqesho lwe Paediatrics and Child Health
Isiyalo of Psychiatry
Ukuziphatha kwe Sleep Medicine
Lokonga Ne (Sydney Nursing School)
Imbali kunye Ifilosofi Science
in 2001, i-University of Sydney nguTshansila, Dame Leonie Kramer, Kwanyanzeleka ukuba urhoxe libhunga lolawulo zeyunivesithi. in 2003, Nick Greiner, a owayefudula eyi nkulumbuso of New South Wales, ibhatyi yakhe njengosihlalo we zeyunivesithi Graduate School of Management ngenxa yoqhankqalazo emfundo nxamnye nguSihlalo wayo ngaxeshanye of British American Tobacco (Ostreliya). kamva, umfazi wakhe, Kathryn Greiner, urhoxile bekhalaza evela kwizithuba ezimbini ibanjelwe kwiyunivesithi njengosihlalo we Sydney Uxolo Foundation kunye nelungu lebhunga yesigqeba Institute loPhando for Asia Pacific. in 2005, i-Public Service Association of New South Wales kunye loLuntu iCandelo Union Public baba kwimpikiswano kunye eyunivesithi phezu isindululo bathengise ukhuseleko kwikhampasi enkulu (kunye campus Cumberland).
ngoFebruwari 2007, iyunivesithi ivumile ukuba afumane isahlulo yelizwe elinikwe College St John ukuba ukuphuhlisa Sydney Institute of Health and Medical Research. Njengeziko Roman Catholic, e yokunikezela iintsilelo ibekwe ilizwe St Johns kuhlobo lophando lwezonyango nenokuthi lwenzelwa kumasango, sifuna ukulondoloza undoqo mission zekholeji nganye,. Oku kwabangela inkxalabo phakathi kwezinye amaqela, phikisana ukuba kuphazamise uphando zonyango lwenzululwazi. kunjalo, oku kokulahlwa kulawulo eyunivesithi ngenxa esi sakhiwo ayenzelwanga le njongo yaye kwakukho nezinye izibonelelo ezininzi kufutshane apho phando endaweni.
Ekuqaleni 2010, le yunivesithi yokuphikisa yamkela logo entsha. Igcina iingalo university efanayo, kodwa kuthatha phezu ngaphezulu jonga lwangoku. Kukho utshintsho kwezindlela, lowo engundoqo kokuba ingubo mantling wokugcina, imilo escutcheon(Isihlangu), ukususwa esongwayo isaci, kunye nabanye ezifihlakeleyo ngakumbi phakathi kweengalo ngokwayo, ezifana ngobuyakayaka noboya yengonyama, inani imigca kwincwadi evulekileyo kunye colouration. Ingubo original yeSizwe ukusuka 1857 liyaqhubeka ukuba isetyenziselwe iinjongo emikhosini nezinye esesikweni, njenge testamurs.
Isenzo eqaliswe Spence ukuphucula uzinzo lwemali yunivesithi oye waphelisa abanye abafundi kunye nabasebenzi. in 2012, Spence kwakhokelela imizamo ukunciphisa inkcitho eyunivesithi ngayo ukuhlangabezana ifuthe mali ukudodobala obhaliso abafundi ngamazwe kulo lonke Australia. Oku kuquka nobunzi ye inani labasebenzi eyunivesithi kunye nkululeko, nangona ezinye ndandiseyunivesithi ngelithi ukuba iziko makaselenquthulwa kwakhona iinkqubo zokwakha kunokuba. Abagxeki bathi push kunokongiwa iye iqhutywa lingabi zolawulo nokunganaki, ziphembelela ugwayimbo ngexesha round zeengxoxo beshishini 2013 ukuba kangaka inkxalabo kwakhona zabo.Bacinga inkxaso-mali karhulumente ukuze imfundo ephakamileyo.
Uphando abasebenzi lwangaphakathi 2012/13, Kwezo nto andifumana ukunganeliseki ngokubanzi indlela aphethwe ngayo eyunivesithi. Wacela yokulinganiswa inqanaba labo isivumelwano ngothotho iingxelo malunga eyunivesithi, 19 per cent abo babenenxaxheba bakholwa “utshintsho ezintsha” zaye iphathwa kakuhle yunivesithi. Kwisaveyi, 75 per cent kwabasebenzi eyunivesithi lubonise abaphezulu abazange ngokubaphulaphula, lo gama kuphela 22 per cent uthe tshintsho iphathwa kakuhle kwaye 33 per cent uthe abaphezulu zaba abayimizekelo emihle.
Kwiveki yokuqala konyaka, abanye abasebenzi wadlula isindululo sokuphela kokuthenjwa Spence ngenxa yokukhathazeka uthe wamtyhala abasebenzi ukuphucula mali ngoxa wafumana ibhonasi ukusebenza $155,000 ukuba wathabatha umvuzo wakhe iyonke $1 kwezigidi, kwi phezulu 0.1 ekhulwini abarhola imali e Australia. Fairfax media Iingxelo Spence kunye nabanye abaphathi Uni babe kwemivuzo ezixabisa izihlandlo ezilishumi ngaphezu kwemivuzo yabasebenzi kunye kabini ukuba iNkulumbuso.
Iinkxalabo malunga inkxaso-mali karhulumente ukuze imfundo ephakamileyo zazibonakala kwakhona 2014 elandelayo isindululo urhulumente wezwe ukuba edalwe kwimirhumo yabafundi. Le yunivesithi wenza iintlobo ngeentlobo inkqubo yokubonisana, nkqubo leyo iquka “intlanganiso kwiholo yedolophu” kwiHolo Great zeyunivesithi 25 EyeThupha 2014, apho ababukeli abafundi, abasebenzi kunye nabaladeli wavakalisa inkxalabo enzulu malunga izicwangciso zikarhulumente wabiza iinkokheli eyunivesithi ukuphembelela ukuchasa iziphakamiso.] Spence wathatha indawo akhokelayo phakathi Australian ingamaSekela Ngqonyela ekubizeni ngokuphindaphindiweyo 2014 ngokuba naluphi na utshintsho mali ukuze indiva ukufikelela ngokulinganayo eyunivesithi ngelixa ukuxambulisana ukuba lulwa imali ukuze iindleko khosi uninzi lwabafundi emfundo ephakamileyo.
Ngexesha Spence kaThixo, iyunivesithi sele itsale ingcikivo ngokuvumela abafundi ukusuka kwisikolo sabucala abane-, iScots College, ukungena eyunivesithi nge a “umendo ilungelo” ngokusebenzisa ngokubhalisa kwi Diploma Yokulungiswa ephakamileyo kunokuba benako ukumelana neemfuno zesifundo entry HSC. Abafundi baseyunivesithi ebizwayo $12,000 ukuthatha le khosi yaye ukususela wavuma inani labafundi ukuya kwizifundo zezidanga. Bazakubhentsiswa Fairfax media, le nkqubo iye wagxeka Phillip Heath, usihlalo sikazwelonke Association of Iintloko zezikolo ezizimeleyo ka Australia.
Uphando ngu Fairfax Media ngo 2015 waveza uyajola ngokubanzi kwiiyunivesithi lonke NSW, kubandakanywa i-University of Sydney. Le yunivesithi useke taskforce kakubi ezifundweni ngo Epreli 2015 ukuze ligcine indawo elikuyo ubunkokheli ekuthinteleni nezehlo ukukopela kakubi ezifundweni.
Uphando lwakutshanje yi Australian Broadcasting Corporation (ABC) nezahlulo obala corporate phakathi Veterinary Faculty kunye neenkampani ukutya kwezilwanyana ezinkulu ukuba kwabangela ukubanjwa imveliso ukutya kwekati yingozi ivavanywe ukukhusela abaxhasi corporate.
Uyafuna ukuxoxa The University of Sydney ? nawuphi na umbuzo, izimvo okanye ncomo
The University of Sydney kwi Map
The University of reviews Sydney
Dibanisa ukuxoxa of The University of Sydney.